Izindaba - I-Battery Powered Security Camera noma i-Solar Powered Security Camera?
Amakhamera okuphepha elanga namakhamera okuphepha anikwe amandla ngamabhethri yizinto ezimbili ongakhetha kuzo zokuqapha kanye nokuqapha izakhiwo ezindaweni ezikude nezinzima zomhlaba. Yize amadivayisi aguquke kakhulu atholakala kuzo zombili izigaba, umehluko usekutheni bazisingatha kanjani izidingo zabo zamandla. Ngenkathi i-solar ihamba kahle ngenkathi evamile yokukhanya kwelanga, ukuphepha kungabukeka kuphazamiseka lapho isimo sezulu sigubuzele amafu nemvula.
Ngakolunye uhlangothi, a ikhamera yokuphepha enikwe amandla ibhethri zingasebenza kahle kuzo zonke izinkathi zonyaka kepha zidinga ukuvuselelwa okudingeka umthombo kagesi. Kepha impendulo enhle ivela kumadivayisi angathepha amandla webhethri nelanga.
Asebenza Kanjani Amakhamera Wokuphepha Kwangaphandle Asebenza Solar?
Amakhamera ezokuphepha angaphandle acindezela izidingo kulezi zinsuku ngenxa yokukhula kwezokuphepha. Kepha ubanika kanjani amandla lapho kungatholakali amandla wegridi? Amakhamera okuphepha anikwa amandla elanga ayimpendulo yalolu hlobo lwesimo. Zingasetshenziswa ukuqapha izindawo ezikude nezindawo eziyinselele ngokwendawo.
Zingasetshenziswa futhi ezindaweni lapho izintambo ezisebenzayo zingasebenzi noma zibiza kakhulu. Amakhaya asemaphandleni, amapulazi, izindawo zokwakha, izinqolobane ngezinye zezindawo lapho ukusetshenziswa kwamakhamera okuphepha elanga kufaneleke kakhulu. Amakhamera ezokuphepha elanga axhumene ne-inthanethi nge-WiFi futhi angafinyeleleka futhi alawulwe kude.
Amakhamera okuphepha elanga axhaswe yiphaneli elanga eyingxenye yohlelo oluhlanganisiwe. Lawa makhamera ezokuphepha awadingi mthombo kagesi noma amakhebuli njengoba enikwa amandla ngqo ngamaphaneli elanga afakwe eduze kwamakhamera uqobo. Basebenzisa amandla elanga ukusebenzisa amakhamera ezokuphepha bese uthola uhlelo lwezokuphepha olungakuletheli inkokhelo yamandla yanyanga zonke noma izindleko zokubhalisa.
Imvamisa, uhlelo lokuphepha kwelanga luthengiswa ngenqwaba ehlanganisiwe efaka iphaneli elanga, ikhamera yokuphepha, namabhethri angavuseleleka. Ngenye indlela, ungathenga izingxenye ezihlukile ze-DIY bese uzihlanganisa zibe ikhamera yokuphepha yelanga.
Asebenza Kanjani Amakhamera Wokuphepha Kwangaphandle Asebenza Ngamandla?
Njengoba igama liphakamisa, ikhamera yokuphepha yangaphandle inikwe amandla ngamabhethri, hhayi ngegridi noma ngamandla elanga. Ukuze amakhamera okuphepha angaphandle akwazi ukusebenza kahle ngaphandle kokuyekethisa izici zawo zokuphepha, adinga ukuba sezingeni eliphakeme futhi amelane nesimo sezulu. Kumakhamera okuphepha anikwe amandla ngamabhethri, isilinganiso se-IP (International Protection) senombolo enamadijithi amabili sisetshenziswa njengezinga elisho amandla abo okuvikela emvuleni, ukungcola, ukukhanya kwelanga, njll.
Isilinganiso se-IP sama-65 sithathwa njengesiphezulu kakhulu esimweni sokumelana nesimo sezulu samakhamera okuphepha anikwe amandla ngebhethri. Lawa makhamera angasebenza ngaphandle kokuphazamiseka noma afake engozini izici zawo zokuphepha ngisho nasebusika obungamakhaza nasebusika. Bahlala bebuka njalo impahla yakho noma ngabe isimo sezulu sinzima kangakanani.
Ukuze kube nekhamera enkulu yokuphepha engaphandle ebhetri, kufanele ibe nekhamera yokubuka esezingeni eliphakeme enikeza izithombe ezicacile zobuso nokunyakaza ebusuku. Manje amanye amakhamera wokubuka ebusuku afakwe amakhamera endlala angakhomba umbala wangempela wezingubo zomuntu, ubuso, nezinye izinto ezibonakalayo ebangeni elingaphezu kwamamitha angu-30.
Ngenkathi ungafaka la makhamera okuphepha noma yikuphi, kufanele ucabangele ukuwafaka ezindaweni ezihlanganiswe yi-WiFi. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi amakhamera akho okuphepha angaqhutshwa futhi afinyelelwe yi-App yawo.
Ungayilawula Kanjani Ikhamera Yezokuphepha nge-App ye-Smartphone?
Izinhlobo eziningi zamakhamera okuphepha zingalawulwa yizinhlelo zokusebenza zazo ezenzelwe i-Smartphone. Uhlelo lulula futhi lulula. Lawa makhamera okuphepha anama-microprocessor ekhompuyutha ngaphakathi kwawo lapho kugcinwa khona konke ukuqoshwa komsindo namavidiyo. Le mininingwane ibuye igcinwe kuseva esezingeni eliphakathi nendawo noma esefu yomhlinzeki wesevisi. Izinhlelo zokusebenza ezisuselwa ku-Smartphone zingafinyelela kule datha kanye nephaneli yokulawula yamakhamera okuphepha.
Lokhu kusho ukuthi yonke imisebenzi yamakhamera okuphepha ingalawulwa nge-smartphone. Lokhu kufaka ukukhuluma nesivakashi ekhaya lakho noma ngabe ukude ngezinkulungwane zamakhilomitha. Ungahlola nokuphakelwa okuvela kukhamera ngesikhathi sangempela.
I-ViCOO uhlelo lokusebenza lweselula lwe-Aopvision amakhamera okuphepha angaphandle. Lokhu kunikeza ifomethi ekulula ukuyisebenzisa yokuqapha amavidiyo aqoshwe ngamakhamera wakho wokuphepha. Ungasebenzisa uhlelo lokusebenza ku-smartphone noma kuthebhulethi yakho futhi ungangena kulo noma kuphi. Ungalawula idivayisi ukude futhi ugcine ithebhu kulokho okwenzekayo endaweni yakho.
Yiluphi uhlobo lwekhamera olungcono: Inikwa amandla elanga noma inikwe amandla ibhetri?
Ngenkathi amakhamera ezokuphepha anikwa amandla elanga enethuba lokusebenza ngaphandle kwanoma iyiphi indawo kagesi yokukhipha ugesi, anenkinga yokungakwazi ukusebenza ngokusemandleni awo lapho isimo sezulu singenelanga. Ngakolunye uhlangothi, amakhamera ezokuphepha anikwe amandla ngebhethri nawo angasebenza ngaphandle kwanoma iyiphi indawo kagesi eseduze kodwa angayidinga ukuze ivuselele amabhethri ayo, kanye ezinyangeni ezimbili kuya kwezi-4.
Kepha isixazululo esihle kakhulu sivela kumakhamera okuphepha e-Aopvision's CG1 anikwe amandla ngebhethri kepha futhi ahambelana namandla elanga. Le yikhamera yokuphepha engenazintambo eyi-100% enebhethri le-6000mAh. Lena ikhamera yokuphepha enhle kakhulu enezobuchwepheshe obunqamula ukopha njengokuqedela okungangenisi manzi kwe-IP65, umbono ogcwele we-HD 1080P ebusuku, inzwa ye-PIR Motion, i-SD Card, i-Cloud Storage, ne-2-Way Audio.
Ama-S1 Solar Panels we-Aopvision ayahambisana nebhethri elishajekayo lamaKhamera Wokuphepha we-CG1.
Lawa makhamera okuphepha ebhethri namandla elanga anezici ezilandelayo ezivelele:
- IMagnetic Mount
- Izaziso ezisheshayo
- Isikhathi Eside Sokulinda
I-Aopvision CG1 enebhethri le-6000 mAh ingahlala izinyanga ze-4 ngokushaja okukodwa ngesilinganiso sokurekhodwa kokunyakaza okungu-10 ngosuku. Okuhle impela nge-Aopvision CG1 ukuthi iyahambisana namandla elanga. Amabhethri ayo angakhokhiswa ngamandla elanga ngokuxhuma kuphaneli yelanga. I-Aopvision CG1 kulula ukuyifaka nokuyisebenzisa. Le khamera yokuphepha yangaphandle inendlela engenazintambo ethatha cishe imizuzu emihlanu yokusetha. Awekho amathuluzi adingekayo kulokhu. Uhlelo luza ngomumo ngentaba kazibuthe ekuvumela ukuthi uyifake kalula noma kuphi lapho ufuna khona.
Ukuphepha Okugcwele kwe-HD
I-CG1 inekhamera ephelele ye-HD 1080P yasebusuku ebamba ukuqoshwa okuhle nokucacile. Ungabuka okuphakelayo kusuka noma yikuphi ngesikhathi sangempela ngohlelo lokusebenza lweselula lwe-ViCOO.
Le khamera yokuphepha yangaphandle ikuvumela ukuba ube nengxoxo nabantu emnyango futhi usukulungele noma kuphi ngohlelo lokusebenza lweselula lwe-ViCOO. Ikhamera yokuphepha inesipikha esakhelwe ngaphakathi nemakrofoni.
Ukuqedela Isimo Sezulu se-IP65
Le khamera yezokuphepha iqinisekisiwe ukuthi ayi-IP65 Weatherproof. Leli yizinga eliphakeme kakhulu lokumelana nesimo sezulu kwekhamera yokuphepha enikwe amandla ngebhethri. Iyakwazi ukumelana nezimo zezulu ezimbi kakhulu njengokukhanya kwelanga, imvula neqhwa.
Ikhamera yokuphepha enikwe amandla elanga noma ikhamera yokuphepha enikwe amandla ibhethri? Zombili lezi zinhlobo zingaba ukukhetha okuhle ngokuya ngezidingo zakho. Kepha lowo othepha amandla elanga nebhethri njengamakhamera ezokuphepha e-Aopvision's CG1 yiwona awine le mpikiswano, yenza ibhalansi efanelekile.